खसीको मासुमा झेल, लकडाउन भन्दै मनपरी मूल्य — janadristi
२६ चैत २०७६, बुधवार ०५:१७
२६ चैत, काठमाडौं । शनिबार शंखमुलमा खसीको मासु किन्न गएका विजय राउतलाई पसलेले रित्तै फर्काइदिए । पसलमा मासु नभएर चाहिँ होइन । किन त ?
‘किलोको १९ सय पर्छ, तर चिनेजानेकोलाई मात्रै बेच्ने हो,’ पसलले दिएको जवाफ सुनाउँदै राउतले भने, ‘सबैलाई बेच्न पुग्ने मासु नै छैन ।’
कोरोनाको संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण देशभर माछामासुको बिक्री घटेको छ । तर, पनि बिक्री ठप्प भने भएको छैन । लामो लकडाउन अवधिमा घरमा बसेर थरिथरी परिकार खानेहरु पनि छन् ।
यही मौकामा माछामासुको व्यापारमा कालोबजारी मौलाएको छ । खसीको मासुको मूल्यमा मनपरी भइरहँदा कुखुराको मासु पनि प्रतिकिलो दुई सय २० बाट दुई सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
खसीबोका काठमाडौं ल्याउन समस्या भएको तर्क गर्दै अहिले मासु पसलले चर्को मूल्य असुल्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । कतिपय सँगसँगै रहेका मासु पलसमा नै खसीको मासुको मूल्य फरक छ ।
काठमाडौंको विजयचोकमा रहेका २ वटा मासु पसलमा आइतबार एकै समयमा खसीको मासुको मूल्य किलोमै दुई सय रुपैयाँ अन्तर देखियो । विजयचोकको ‘ए-वान मिट सप’ किलोको १३ सयमा विक्री भइरहँदा त्यसको २ सय मिटर पर ‘मुस्कान मिट सप’ ले १५ सय प्रतिकिलोमा मासु बच्दै थियो । यस्तो ठगीबारे उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमै गुनासो पोखेका थिए ।
ब्यापरीको दावी अनुसार काठमाडौंमा खसीबोकाको आपूर्ति हुनै सकेको छैन । ब्यापारी उमेश खड्गी कलंकीको खसी बजारमै ताल्चा लागेकाले खसीको मासु विक्री गर्न नपाएको बताउँछन् ।
उनकाअनुसार बाहिरबाट काठमाडौंमा खसी आउनै बन्द भएको छ । काठमाडौं वरपरका ग्रामीण क्षेत्रबाट खसी ल्याएर सबैले फाट्टफट्टट रुपमा मासु बेचिहरेको उनले बताए ।
‘हिजो गोदावरीबाट एकजनाले जिउँदोमै ८ सय रुपैयाँ किलोको खसी ल्याइदिउँ भनेर फोन गर्दै थिए,’ खड्गीले भने,’ त्यस्तैगरी आएका खसी काटेर विक्री भएको हुन सक्छ । नत्र सजिलोसँग मासु बेच्ने गरी खसी किन्न पाएकै छैन ।’
आपूर्ति न्यून : थानकोट प्रहरी
थानकोटस्थित प्रहरी प्रभाग खसीबोकाको आपूर्ति ठप्प नभए पनि न्यून रहेको बताउँछ । प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले फाट्टफुट्ट मात्रै खसी-बोका बोकेका गाडी काठमाडौं प्रवेश गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘पहिलेको जस्तै परिमाणमा आएका छैनन् । एक-दुई गाडी खसी बेला-बेलामा भित्रिएका छन्,’ उनले भने, ‘बरु भैँसी र राँगाहरुको आपूर्ति बन्दजस्तै छ ।’
प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले पशुजन्य उत्पादनलाई ओसारपसार गर्न नरोकिएको बताए । कुखुरा बोकेका गाडीलाई पनि निर्वाध चल्न दिइएको उनको भनाइ छ ।
तर, त्यसरी काठमाडौं भित्रिने खसी बोका कहाँबाट कसरी विक्री हुन्छन् भन्ने कसैलाई जानकारी छैन ।
मासु व्यवसायी के भन्छन् ?
मासु व्यवसायी संघले उपत्यकामा खसीको मासुको मूल्यमा भएको मनपरीबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । लकडाउनका कारण उपत्यकामा खसीको कारोबार पूर्ण रुपमा बन्द रहेकोे संघका महासचिव चित्यप्रसाद शाहीले बताए ।
‘लकडाउनपछि सबै पसल बन्द छ, हामीले खसी र मासुको कुनै भाउ नै तोकेका छैनौँ,’ उनले भने । संघ मातहतका मासु व्यवसायीले लकडाउनका कारण खसी आयात गर्नै नसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा दुई हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा खसीको मासु बिक्रि गरिएकोबारे आफूहरुलाई पनि गुनासो आएको भन्दै उनले त्यसमा संघ माताहतका व्यवसायी संलग्न नभएको दाबी गरे ।
‘गाउँबाट खसी ल्याएर टोल तथा केही पसलहरुमा भाग लगाएर महँगोमा मासु बेचिएको हुन सक्छ,’ शाहीले भने ।
लकडाउन सुरु हुनुपूर्व काठमाडौंमा खसीको मासुको मूल्य १२ सय रुपैयाँ थियो । माछा मासु अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको सूचीमा रहे पनि खसी नै नपाएका कारण व्यवसाय ठप्प भएको संघको दाबी छ ।
खसीबोकाको आपूर्ति प्रभावित भइरहँदा सरकारले त्यसको सजीकारणका लागि सक्रियता देखाएको छैन । पशुसेवा विभागले पनि मौन छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग पनि बजारमा बढेको कालोबजारी टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने र उपभोक्तालाई ठगिन नदिन बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग अहिले लकडाउन भन्दै हात बाँधेर बसेको छ ।
विभागका निर्देशक सागर मासुको मूल्यबारे गुनासो आए पनि प्रमाण नभइदिँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘बढी मूल्य तिरेको बिलबिजक नभई हामीलाई कारवाही गर्न अप्ठेरो हुन्छ,’ उनले भने, ‘गुनासो आएको ठाउँमा पुग्दा पसलेले तोएकिो मूल्य नै लिएको दावी गरिरहेका छन् ।’
उपभोक्ताले बिलबिजक सहित उजुरी गरे मासुमा कालोजारी गर्नेलाई त्यसै नछाड्ने उनी दावी गर्छन् ।